Iintyatyambo zobubi, umsebenzi wobugcisa kaCharles Baudelaire | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Iincwadi, Imibongo, Ezahlukeneyo
Iintyatyambo zobubi (I-Les Fleurs du Mal, ngesiFrentshi) Yintsomi yemibongo eqalekisiweyo ebhalwe nguCharles Baudelaire kwaye yapapashwa ngo-1857. Oku kuthathwa njengomnye wemisebenzi ebalaseleyo yombhali, engumzekelo wesimboli saseFrance kunye nokuhla. Isicatshulwa sisibonakaliso sexesha apho kwakunyanzelekile ukuba umbhali ahlasele oohlohlesakhe bobukhosi besibini.
Ngokusebenzisa amagama ngobuchule, umsebenzi wakhonza uBaudelaire njengophuncuka koko kubizwa ngokuba yi "spleen" (imvakalelo yokukruquka okubangelwa yimbongi xa ikhatywa luluntu oluhanahanisayo nolonakeleyo). Ngokwombhali, eyona ndlela yokuphepha ukuzisola kukusebenzisa ubugcisa, imibongo, ukugqitha nothando, okukude nokubandezeleka. Ngale nto kunye neminye imisebenzi yakhe IBaudelaire ithathwa njengenye yeembongi ezinkulu zehlabathi.
2 Iintyatyambo zobubi
3.1 Incwadi yokuqala inamacandelo asixhenxe:
3.1.3 Okwesithathu nowesine
3.1.4 Eyesihlanu neyesithandathu
3.1.5 Inxalenye yokugqibela
Ukubhala lo msebenzi, uCharles Baudelaire waphefumlelwa yindawo engcolileyo kunye nobumnyama benkulungwane ye-XNUMX yobugcisa baseParis., apho wayetshintshana phakathi koonongogo kunye ne-hashish, i-opium kunye ne-laudanum ... konke oku ukubaleka inyani ebonakala ibuhlungu. Ukongeza koku, ubuntu beli xesha langoku ngokwabo kunye nokungakhathali kwawo kwamkhokelela ekubeni afune ubuncwane bobubi, izifo, ukufa kunye nezoyikekayo.
Njengomlingani, uBaudelaire Wazama ukufumana ukukhanya ebumnyameni obamtyayo ngezo ntsuku. Nangona kunjalo, umbhali ekugqibeleni waba lixhoba lokudikwa okungaguqukiyo, okwathi emva koko kwamkhokelela kwindlela yobomi obundlongondlongo nehlazo obungazange buqapheleke kumgangatho ophezulu wedolophu.
Ukuntywiliselwa kwimeko yakhe yokuthanda kakhulu kunye nombono wakhe owodwa wobubi, uBaudelaire wabhala eyona nto ithathwa njengeyona misebenzi yakhe ibalaseleyo. Iintyatyambo zobubi ifuna ukugxininisa izono zomntu, igxininisa ukungazi kwayo. Umsebenzi ngokwawo uyisampulu yokukhanya kobugcisa njengembonakaliso yeemvakalelo ezinzulu zomntu.
Kwakunjalo kanye ngenxa yesimilo sayo, esothusayo nesigqwesileyo, ukuba le ntsomi yabangela impikiswano enkulu, yabangela imbongi iingxaki ezininzi zomthetho. Umbhali watshutshiswa ngenxa yokuqulathwe kulo mqulu, kwaye wanyanzelwa ukuba angabandakanyi imibongo yakhe emithandathu ethathwa njengokuziphatha kakubi ngela xesha. Ngaphezulu, u-Baudelaire kwafuneka ahlawule isohlwayo sama-franc angamakhulu amathathu. Kakade ke, oku akuzange kukuthintele ukuphinda kwenziwe kulo ngowe-1861, kuquka nemibhalo ethile engapapashwanga.
Umsebenzi uthathwa ngokuba nesimbo esiqhelekileyo, kwaye umxholo wayo uthathwa njengothando. Le ntsomi yayilelwe njengentsontelo yemibongo enxibeleleneyo kwaye inxulumene omnye nomnye, njengebali apho umlinganiswa ophambili - imbongi - ngokuthe ngcembe ewela kude kwinyani elusizi kwaye azibhaptize ngokugqithileyo ebomini. Ukuba kule meko, imbongi ichaza lo mfazi njengomntu okhohlakeleyo othintela ukunyuka kwakhe ekukhanyeni.
UCharles Baudelaire ucaphule.
Lo msebenzi wenze iinguqu ezininzi kulwakhiwo lwawo ekuhambeni kwexesha. Oku bekufanelekile, njengoko bekutshiwo, kwinto yokuba emva kokumiswa kwesicatshulwa yathathelwa ingqalelo njengoburhabaxa bokuziphatha okubi okuphazamisa ucwangco, uxolo kunye namasiko amahle elo xesha.
Incwadi yokuqala inamacandelo asixhenxe:
Kwinxalenye yokuqala yomdlalo weBaudelaire wazisa uluntu ngombono wakhe ngombongo wakhe ongalibalekiyo "Kumfundi." Apha umbhali utyhila (ngokuyinxenye) okuza kubakho kamva; yindlela eyenza ukufunda kufutshane ngakumbi.
Emva koko, uya ku "Spleen and Ideal", apho umbhali acebisa iifom zakhe azithandayo ukuphepha inyani ekufuneka aphile kuyo; yinyani egcwele isithukuthezi nokungazi (i "Spleen"). Ezi fomu, ewe, bubugcisa kunye nobuhle. Kwi "Ideal" ucacisa ngokuqinileyo ukubaleka ngokuthe ngcembe kule nyani ayithatha njengembi.
Kwinxalenye yesithathu neyesine ("Iintyatyambo zoBubi" kunye "neMizobo yaseParis") umbhali uzama ukufumana ubuhle eParis, leyo ayilahlekisileyo. Nangona kunjalo, olu phando alukho ngaphandle kwenkohlakalo, iimeko ezothusayo kunye nobubi uBaudelaire abubandakanya kakhulu kwimibongo yakhe.
Xa engafumani ukuphakama kwakhe okuphuphayo okanye ukuthethelelwa kwesixeko sakhe, umbhali ubuyela kububi. Kulapho bangena khona isahlulo sesihlanu nesithandathu, "Imvukelo" kunye "newayini", kwaye kuzo akukho kubuyela kubomi obucocekileyo, akusenakwenzeka hayi iBaudelaire, hayi imibongo yakhe.
Kwezi zigaba phantse zokugqibela ungabona umzobo ogqibeleleyo weDantean opeyintwe yimbongi, ovumela indlela isahlulo sesixhenxe nesokugqibela, ekungekho enye into ngaphandle ko "Ukufa". Kulapha, njengoko igama layo libonisa, ukuba ukubola okupheleleyo kugqityiwe ekubhujisweni kobukho. Akunakuba ngenye indlela.
UBaudelaire, ngesakhono sakhe esikhulu sobuchule boonobumba, wakwazi ngobuchule ukwazisa umfundi kwisichazi saseParis ngaye. Kubalulekile ukuba uqaphele, kwakhona, ukuba wonke lo mxholo awuzange uvele ekuqaleni ngenxa yokunyanzelwa.
Kuhlelo lwamva Iintyatyambo zobubi se zibandakanya ezona zibongo zithandekayo zikaCharles BaudelaireUkwenza ulwakhiwo lomsebenzi omtsha, olunokufundwa ngolu hlobo lulandelayo:
"Al Lector" ("u-Au Lecteur").
"Iintyatyambo zoBubi" ("Fleurs du Mal").
"Imizobo yaseParis" ("Tableaux Parisiens").
Ngenxa yongquzulwano lokuziphatha olwabangelwa yile ngqungquthela, kunye nokuba kuye kwafuneka ukuba akhuphe imibongo yakhe emithandathu, Kwakungekho ngo-1949 apho uluntu lwalunakho ukonwabela ukubola kunye ne-eroticism engafakwanga Iintyatyambo zobubi njengoko iyilelwe ngumbhali. Into enomdla kukuba izilungiso zalo msebenzi zisapapashwa namhlanje.
UCharles Baudelaire wazalelwa eParis; Iibhayografi malunga nombhali azicacisi nokuba unyaka wokuzalwa kwakhe wawungu-1821, okanye iminyaka elishumi kamva. UBaudelaire wayengumlobi, umgxeki wobugcisa, umbhali wezincoko, kunye nomguquleli. Kulo msebenzi wokugqibela wayesebenza eguqulela imibongo kunye namabali oko wayekuthatha njengeyona ndoda yamandulo yexesha lakhe: uEdgar Allan Poe.
Uthathwa njengenye yeembongi ezibalulekileyo zesimboli sesiFrentshi, kunye noyise wokuxhamla.. UBaudelaire wagxekwa kanobom ngomsebenzi wakhe, kwaye wabandakanywa kudidi lwe "uqalekisiwe imbongi", oku kwindlela yakhe yokuphila ye-bohemian kunye nombono wakhe omangalisayo wobubi, uthando kunye nokufa. Wayekwabizwa ngegama elithi "I-Dante yexesha langoku", enkosi kulo mbono mnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iintyatyambo zoBubi, umsebenzi wemagna nguCharles Baudelaire
Omnye wabaphathi beenqanawa (kunye nomphathi) wolwandle
I-Awardeta Award 2019 yeJavier Cercas. Ukugqibela: UManuel Vilas